Tsara mitsara araka ny antontam-namana no Matoritory eo amin'ny ambaratonga 29 fanamarihana toerana aho handeha hanao fitsarana ny antso ka hanao hoe sarotra ny iray. Amin'ny tanjona ny fanadiovana 99% ny vato sy ny fitadiavam-bola 16 000 hevitra aho manana flashbacks sy mitadidy ny antony izany dia lasa lavaka nijanona ny halavan'ny sasany ho an'ny maro.
Tsy sarotra ny, ny frustratingly mafy!
Fa raha afaka manao izany ianao dia afaka, ny resaka fotsiny aloha fisainana sy mahafantapantatra hoe ny vokatry ny zavatra ataontsika (Wow dia toa tahaka ny kilasy faha-10 mpampianatra!)
Mahazo ny baomba tamin'ny ankavia nidina ho any amin'ny vato no laharam-pahamehana voalohany.
Voalohany indrindra vaky ny balaonina rehetra eo amin'ny tena sisa mandra-baomba mamely ny tariby cages, dia mba mitsofa azy! izany no hanome anareo ny sasany headway. Miasa miaraka ny fomba mandra hampidina ny fanalahidin'ny ny mihidy ny vato, ary hanafaka azy ireo indray mandeha ny fanalahidy dia maimaim-poana. Andramo ary tehirizo ny sisa balaonina, izy ireo no ho avy amin'ny mora raisina tsy ho ela. Rehefa avy nanokatra ny laharana ny harambato ary eny Fanahy ho any an-Etera dia mety manomboka popping balaonina. Ianao mahita fa nanenika ilay baolina fingotra kilalao afaka hamaha cages vitsivitsy isaky ny mandeha, fa ihany nitsoka ny mifanila biriky, ianao tsy Hipoaka ny kilalao miendrika biriky ao anatin'ny cages fa ny olona manaraka izany! Aza mandeha loatra indray mandeha adaladala ianao nandatsaka ny lamba ampy voalohany ka handrava misokatra ny cages avy ambany, hiaro toy ny balaonina maro araka izay azo atao…foana izy ireo toy ny hoe tonga amin'ny mora raisina, fa hitandrina izay mihetsiketsika midina efijery.
Fanalahidy hamohana biriky
Tsy ny ambaratonga izay misy ny hetsika toy izany dia voafetra namely izany, fa dont manadino momba ny manapoaka tsipoapoaka, hampiasa azy ireo amim-pahendrena sy tsarovy fa tsy afaka manomboka fitadiavam-bola iray hafa mandra-voalohany efa Niainga. Raha toa ianao ka iray eo amin'ny solaitrabe sy ny rehetra nanangana ny tsikombakomba lehibe mialoha angamba nanorina azy eny fotsiny, ary hanala kely. Tsarovy ny efijery fanaony mampilatsaka raha misy hetsika sy ny vato na ny balaonina mitazona azy.
Ny fananana ny baomba teo amin'ny ambany mety ho tena mora raisina!
Betsaka kokoa ny fanalahidy sy ny manapoaka tsipoapoaka eto ambany dia tonga lafatra ho an'ny nanafaka azy ireo. Ataovy ao an-tsaina ny zava-kendrenao rehefa mandeha, dont mahita ny tenanao eo amin'ny ambany ny lamba amin'ny licorice isan-karazany kitapo ny vato miloko sisa sy ny fomba fisainany 'aiza ny biby fiompy?’ ny tanjona dia ny hanadio 99% ny kilalao miendrika biriky ….doh! Midika izany dia afaka ihany no 1 ankavia! Mikendry ny loko miaraka foana ary raha afaka mamonjy ny baomba ny ambany Lazaiko marina aminareo izao no ho avy amin'ny mora raisina, tsy azo ihodivirana dia hiafara amin'ny vato roa…Eny, no I miresaka hahakivy?